i don't know how to say...it happens all the time...i have the same stories..i neglected them if i couldn't tolerate more...don't get upset urself ...well,i hope u will do ur best to help them...may Buddha bless u ... cheers , ryan
Jul 26, 2007, 11:31:00 PM
၁။ တတိယနိုင်ငံရောက် ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ ပတ်သက်မှုမရှိသူဆိုရင် လွန်ဆွဲပွဲမှာ...ကို ခံစားတတ်မလား သို့မဟုတ် ချက်ချင်း နားလည်မလား မသိ။ ကျနော်ကတော့ ဒုက္ခသည်မို့ ဒီ ၀တ္ထုတိုလေး ဖတ်ပြီး ချက်ချင်းကြိုက်သွားတယ်။
၂။ ကလိုစေးထူး နာမည်ကို ကိုဝေလင်းဘလော့ဂ်စီဘောက်မှာ ကဗျာတွေ လာဖတ်သွားတယ် ဆိုပြီး အခုလေးတင် ရေးထားတာ တွေ့လိုက်သေးတယ်။ သိပြီးပြီမဟုတ်လား၊
ကိုဝေလင်း(နှင်းခါးမိုး) ဆိုတာ မှတ်တမ်းမဲ့မှတ်တမ်း စာအုပ် အခန်း ၁၊ ၃ တို့မှာပါတဲ့ အေဘီအက်စ်ဒီအက်ဖ် တာဝန်နဲ့ရန်ကုန်ရောက်နေတုန်း အဖမ်းခံရတဲ့ ဝေလင်း ဗျာ။
ဟားဟား အဲဒါကတော်သေးတယ်ဗျို့. ဒီနိုင်ငံမှာ ဒုက္ခသည် စခန်းက ရောက်လာတဲ့ လူပေါ့ဗျာ၊ ၆ နှစ်ရှိပြီ ဒီနိုင်ငံမှာ အခြေချတာ. ထိုလူတွေက ၆နှစ်ရှိပြီ ပိုက်ဆံ ၁၀၀ တောင် မစုမိဘဲ နေနေတဲ့ လူတွေ ရှိနေတယ်ဗျို့ .. ပုံမှန်အတိုင်းပဲ ကျွန်တော့ဆီက လာချေးသပေါ့ဗျာ ..
Jul 27, 2007, 1:59:00 AM
အကြိမ်ကြိမ်ကြုံဖူးပါခဲ့တယ်။ ကိုစေးထူးရေးလိုက်တော့ လူတွေရဲ့ စရိုက် က ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ပါဘဲ.
Jul 27, 2007, 4:54:00 AM
အဲဒီလို လွန်ဆွဲပွဲမျိုး ကျမလည်း ဖြစ်ဖူးပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ မကောင်းတဲ့စိတ် အပြန်အလှန် လွန်ဆွဲသလို ဖြစ်နေရာက နောက်ဆုံးတော့ အားကြီးတဲ့စိတ်က အနိုင်ရသွားတာပါပဲ။ ကောင်းတဲ့စိတ် အနိုင်ရဖို့အတွက်ကတော့ စိတ်ထားတတ်ဖို့ လိုတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ စိတ်ထားတတ်ဖို့ကလည်း အမြဲလေ့ကျင့်နေရလိမ့်မယ်လို့ ကျမကတော့ ထင်တာပါပဲ။ စိတ်ဆိုတာက မကောင်းတဲ့ဘက် ခပ်ယိုင်ယိုင် မဟုတ်လား။
ကိုယ့်အတွင်းစိတ်ကို အမှန်အတိုင်း ခုလိုပုံဖော်ထားတာ သဘောကျတယ်။ ဒါဟာ လူတွေရဲ့ ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘာဝပါပဲ။
Jul 27, 2007, 9:20:00 PM